Hello Nepal News » सनको ४ गोलमा ४ असिस्ट गर्ने केनका नाममा दुर्लभ रेकर्ड
इंग्लिस क्लब टोटनह्यामका स्टार फरवार्ड ह्यारी केनका नाममा प्रिमियर लिग फुटबलमा दुर्लभ रेकर्ड बनेको छ । आज टोटनह्यामले लिगको दोस्रो खेलमा अवे मैदानमा साउथह्यामपटनलाई २–५ ले हराउनेममा ४ असिस्ट र १ गोल गरेका सनका नाममा नयाँ रेकर्ड बनेको हो ।
टोटनह्यामले घरेलु टोलीविरुद्ध कमब्याक जित निकाल्दा दक्षिण कोरियन फरवार्ड सन हेङ मिन एकैले ४ गोल गरेका थिए । उनका ४ वटै गोलमा केनले नै असिस्ट गरेका थिए भने उनले अन्तिम समयमा आफूले पनि १ गोल गरेका थिए । यसरी उनले समग्रमा साउथह्यामपटनविरुद्ध ४ असिस्ट र एक गोलसहित सोझै ५ गोलमा सहभागी भए ।
प्रिमियर लिग इतिहामा एकै खेलमा कुनै एक खेलाडीले ४ गोलमा असिस्ट दिएको यो पहिलोपटक हो । यसअघि कुनै पनि खेलाडीले सिंगल खेलमा ४ असिस्ट गरेका थिएनन् ।
त्यसैगरी, केन प्रिमियर लिगमा एकै खेलमा ५ गोलमा सहभागी हुने पछिल्ला खेलाडी बनेका छन् । पछिल्लोपटक सन् २०१८ मा लिभरपुलका मोहमद सालाहले वाटफोर्डविरुद्ध ४ गोल र १ असिस्ट गरेर ५ गोलमा सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी, केन अब प्रिमियर लिगमा एकै खेलमा ४ असिस्ट गर्ने पहिलो इंग्लिस खेलाडी पनि बनेका छन् ।
प्रकाशित मिति ४ आश्विन २०७७, आईतवार १४:१८
‘इएल क्लासिको’का लागि रियलका प्रमुख खेलाडीलाई विश्राम
च्याम्पियन्स लिगमा पिएसजी र युनाइटेडको भिडन्त आज राति : कसले मार्ला बाजी ?
जिदानले गरे हल्यान्डको प्रशंसा
यो सिजनलाई बाई–बाई : भान डाइकको अप्रेसन हुने क्लबद्वारा पुष्टि
बुन्डेसलिगा : लेइपजिग र डर्टमुन्डको जित
विश्वकप छनौट : इन्जुरी समयको गोलले कोलम्बिया चिलीसँग हारबाट बच्यो
विश्वकप छनौट : ६४औं स्थानको इक्वेडरसँग उरुग्वेको ‘नमिठो’ हार !
विश्वकप छनौट : अर्जेन्टिनाले निकाल्यो लगातार दोस्रो जित
रोनाल्डोलाई कोरोना संक्रमण : पोर्चुगिज टोली छाडे
फ्रान्सका युवा खेलाडी भन्छन्– ‘रोनाल्डोले दिएको जर्सी धुनेछैन’
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा मेस्सी नयाँ कीर्तिमान नजिक
नेपालमा एकैदिन थपिए ५ हजार ८ सय कोरोना संक्रमित : हालसम्मकै उच्च
१६ वर्षीया किशोरी २४ घन्टाका लागि फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त !